अलिकति त सरम गर्नुस् न सीताराम सर !
ARCHIVE, MARKET WATCH, SHARE MARKET, SPECIAL » अलिकति त सरम गर्नुस् न सीताराम सर !
आदरणीय सीताराम थपलियाज्यू, नमस्कार !
सेयर बजारको एउटा सानो लगानीकर्ता म, सेयर बजारसम्बन्धी समाचार हेर्ने कहिलेकाहीं अनलाइनमा घोत्लिने गर्छु । यस्तै घोत्लिररहँदा कतै एउटा समाचार देखें । समाचारमा नेपाली पूँजी बजारको अवस्था र भविष्यबारे आधारभूत तालिम आयोजना गरेको थियो एउटा संस्थाले र तपाईं त्यहाँ टुप्लुक्क पुग्नुभयो । लगानीकर्ताहरुलाइ भेट्न समय नै नहुने तपाईंलाई यस्ता काममा खुब फुर्सद हुँदोरहेछ, देखिनुभयो टुप्लुक्क !
समाचारका अनुसार तपाईंले नेपाली सेयर बजारमा भइरहेका पहलका बारेमा बोल्नुभयो रे !
त्यसमा मेरो कुनै आपति छैन र हुनुपर्ने कारणपनि छैन । नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई जागरुक बनाउनु तपाईं हामी सबैको धर्म हो । तर एकपटक छातीमा हात राखेर मनन गर्नुहोस् त, कुनै नाफामुलक संस्थाले नाफामुलक कम्पनीहरुलाई प्रायोजकका रुपमा राखेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेप्सेका महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धककै हैसियतले पुग्नु के सहि थियो ? के अव भोलि कुनै कार्यक्रममा हामी लगानीकर्ता मिलेर आयोजना गरेको सामान्य कार्यक्रममा तपाईं आएर बोल्नुहुन्छ ? अरुलाई पैसा लिएर तपाईंको अनुहार देखाएर पैसा कमाउनतिर हामी कहिँ लाग्यौं भने तपाईं खुरुखुरु मान्नुहुन्छ ? के तपाईंको पदीय मर्यादाले त्यो दिन्छ ? के सेयर लगानीकर्ताहरुलाई तालिम दिने मैले एउटा कम्पनी खोलें भने तपाईं त्यसको मोडल बन्न तयार हुनुहुन्छ ?
फोटोहरुपनि हेरियो । बजारका केहि ठुलै खेलाडीहरुसँग तपाईं एउटै कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो । यो तरिका ठिक भयो र सीताराम जी ? तपाईंको व्यक्तिगत जीवनपनि पक्कै छ । तर नेप्सेका बारेमा कुरा गर्न जानुभएको तपाईंलाइ यो सुहायो र ? तपाईंको व्यक्तिगत भ्रमण भन्ने तर्कपनि होला कसैको । तर शनिबारको फुर्सद मिलाएर तपाईंले नगरकोटको डाँडामा गएर नेप्सेका सबै आन्तरिक कुराहरु भनिदिनुभयो भने त्यो दिन के भन्ने ? यसरी नाफामुलक संस्थाको तपाईं मोडल बन्न मिल्छ र ? यसरी नाफामुलक संस्थाको प्रचार प्रसारमा लाग्न तपाईं मिल्छ र ?
हुन त मेरो आयोजक संस्थाप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन । हुनुपर्ने कारणपनि छैन । र म आयोजकलाईपनि चिन्दिन । तर नेप्सेको महाप्रबन्धककै हैसियतले जाने, नेप्सेकै कुराहरु गर्ने, अनि बजारका ठुला खेलाडीहरुसँग खुलेआम तस्विर खिच्ने तपाईंको रबैयालाइ हामीले कसरी बुझ्ने ?
तपाईंको जस जससँग साँठगांठ छ भन्ने सुनिएको छ तपाईं, तिनी सँगै कार्यक्रममा पुग्नुभएको छ । सेयर बजारमा लाग्ने यस्ता आरोपहरुलाई सकेसम्म कम गर्ने पहल गनुपर्ने ठाउँमा तपाईं त आफैं 'हो कि क्या हो' भनेर जनताले बुझ्ने शैलीमा किन विवादममा आउन खोजीरहनुभएको छ सीताराम जी ! अझ सुनेको कुरा पत्याउने हो भने तपाईंलाइ कार्यक्रममा लैजाने ल्याउने बजारका एक खेलाडीकै आफन्तको कम्पनीले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । अव हामीले के बुझ्ने ? सीताराम थपलियाले नेतृत्व गरेको संस्थाको विधि विधानमा अरु चल्नुपर्ने हो कि, तीनै लगानीकर्ताहरुको चम्चागिरी गरेर तपाईं धनी बनीरहनुभएको छ ।
त्यत्रो धेरै पढेलेखेको मान्छे तपाईंलाइ धेरै भन्नुपर्दैन होला, तर अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुभएको छ ? के यसरी एउटा नाफामुलक संस्थाले गरेको नाफामुलक कार्यक्रममा तपाईंले ठुला लगानीकर्ताको एक पात्रसँग गएर नेप्सेकाबारे कुरा गर्न नेप्सेको महाप्रबन्धकले मिल्छ ? तपाईंलाइ त्यो अधिकार कसले दियो ? मैले भोलि सेयर लगानीकर्ताहरुका लागि कुनै कार्यक्रम गरें भने तपाईं आउनुहुन्छ ? भोलि म के कुनै दिन बजारका दर्जनौं कार्यक्रमहरुमा तपाईं जान सक्नुहुन्छ ? के त्यो तपाईंको पदीय मर्यादाले दिन्छ र ?
'के जाति गर्नेलाईभन्दा देख्नेलाई लाज' जस्तो काम नगर्नुहोस् सीताराम जी ! हाम्रो नेप्सेको महाप्रबन्धकजस्तो मान्छे कुनैपनि नाफामुलक संस्थामा नेप्सेको महाप्रबन्धककै हैसियतले उक्त कार्यक्रममा गएर नेप्सेकै बारेमा बोल्न तपाईंलाइ न तपाईंको अधिकारले दिन्छ, न तपाईंको पदीय मर्यादाले । अलिकति त सरम गर्नुस् न सीताराम जी !
(कार्यक्रम आयोजकप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । आयोजकले गरेको कामको सम्मान गर्छु । तर नेप्सेका महाप्रबन्धक त्यो कार्यक्रममा मात्र होइन, कुनै त्यस्ता कार्यक्रममा जानुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो ।)